मात्र यी २ चिजको प्रयोगले तपाईको हड्डि बन्नसक्छ ख्रोक्रो, फोक्सोमा पनि देखिनसक्छ यस्तो समस्या ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन ०६, २०७८ समय: २०:१४:२९
काठमाडौँ । आजको समयमा बजारका अधिकांश मानिसहरू बजारका रहेका खानाहरु खान मनपराउँछन् । यी व्यक्तिहरू, जसले यस्ता मानिसहरुमा समयको साथ पौष्टिक तत्त्वहरूको अभाव हुन थाल्छ।
पौष्टिक तत्त्वहरूको अभावका कारण तिनीहरूको शरीर पनि कमजोर हुन्छ। शरीरको कमजोरको कारण, उनीहरूलाई विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ।
व्यक्तिहरु बजारका धेरै चीजहरू धेरै मात्रामा खान्छन् जसले गर्दा उनीहरूको हड्डीहरू समयसँगै खोक्रो हुन्छन्। हड्डी खोक्रो हुने कारणले गर्दा तिनीहरूको शरीर कमजोर हुन्छ र उनीहरूको जोर्नीहरूमा दुख्ने समस्या पनि आउँछ।
आज हामी तपाईंलाई यस पोस्टको माध्यमबाट दुईवटा चीजहरूको बारेमा कुरा गर्न जानेछौं, जुन चिजको अत्याधिक सेवनले तपाईंको शरीरको हड्डीहरू समयसँगै खोक्रो हुदै जानेछन्। उसोभए आउनुहोस् ती चीजहरूको बारेमा जानौं ती के के हुन् त ?
मासकोु दैनिक सेवन:
आजको समयमा धेरैजसो मानिसहरु मासुको सेवन अधिक मात्रामा गर्दछन् । मासुको सेवन हाम्रो शरीरको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। तर मानिसहरूलाई मासु दिनदिनै खानाले हुने नोक्सानीको बारे थाहा छैन। जसको कारण मानिसहरू धेरै मासु खान्छन्।
त्यसकारण हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यदि तपाईंले धेरै मासु खान्नुहुन्छ भने, मासुमा हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मात्राले बिस्तारै तपाईंको हड्डीहरू पग्लन्छ। जसको कारणले तपाईको शरीरमा जोर्नी पनि दुख्न थाल्छ।
नुनको अधिक सेवन:
केहि मानिस धेरै मात्रामा नुन खान्छन्। ती व्यक्तिहरू जसले धेरै नुन खान्छन् उनीहरूलाई नुनको सेवनले हुने नोक्सानको बारेमा थाहा छैन।
त्यसकारण हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि यदि तपाईंले धेरै नुन खाने गर्नुभएको छ भने यसले तपाईंको शरीरको हड्डीहरूलाई पगाल्न थाल्छ। हड्डीहरू ढिलो ढिलो गरी गल्दा तपाईंको शरीरको हड्डीहरू कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसकारण, सकेसम्म थोरै नुन लिनुहोस्।
१०६ पटक हेरिएको